Must Read “Icciitii OPDO jidduu gala irraa Godinoota fi Aanootaaf darbaa jiru. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMust Read “Icciitii OPDO jidduu gala irraa Godinoota fi Aanootaaf darbaa jiru.
Opdon kan tv irratti dubbatuufi karaa keessaa kan hojjechaa jiru Iccittii dhoksaa qaba.uummataan walga’ii irratti kan dubbatan kan biraa.kan dhoksaan Miseensoota isaan amanamoo waliin ajaja kennaa jiran saaxilamaa jira.Haa ilaallu.
-Opdon Tokkummaa oromoo yaroo jedhu Party siyaasa oromoo biroo waliin wal makuu otoo hin taane Tooraa Eprdf/opdo qofaan ta’uu akka qabu.
-Komiin uummataa hoogganoota opdo ciccimoo(Hattoota) irratti waan ta’eef haangoo irraa akka hin kaane gochuu .
-Yoo isaan haangoo irraa kaafne opdon filmaata dhufuu darbuu waan hin dandeenyeef tuqamu hin qaban.
-Yoo kaabinoota bakka hundatti jibbamanii haangoo irraa kaafne opdon hundeen kufuu waan dandeessuuf tuqamu hin qaban.
-opdon Dhaabbilee siyaasaa Bara dhufu opdo waliin dorgoman opdon mo’achuu hin dandeessu.kanaafuuJarreen kun akkaataa Filannoon (korojoon)hatamu fi Filannoon sobaan mo’uun danda’amu muuxannoo waan qabaniif.
-Haaromsi akka opdo tti gaggeeffame kaabinoota badii raawwatan hari’aachuuf otoo hin taane akka opdo tti yaada uummtaa qorrisisuuf akka ta’e.
-Yoo kaabinoota ummanni komii itti kaase hunda xuqne kaabinoonni Nagaa qaban ciccimoon waan hin jirreef mormiitoonni akka salphaatti nu kuffisuu waan ta’eef komii ummataa otoo dhageenyuu bira darbuu qabna.
-Filaannoo bara dhufuuf opdon harka lafa jalaan of cimmisee EPRDF waliin ta’uun dorgommii Filaannoo bara dhufuuf ammaa calqabee itti qopha’uu akka qaban.
-Party siyaasaa mormituu oromoo biroo keessatti dhoksaan Miseensoota opdo itti naquu.
-Pary siyaasa oromoo opdo ala tan qarshii/bu’aan qabanii ijaarachaa deemuu.
-Namoota ciccimoo oromoo ta’an opdon ala kan jiran galmeeffachaa deemuun ordofuu.
-Bakka opdo irratti mormiin baay’atu olaantummaa seeraa haa kabajamu jechuun ummina nageenyaan cimnaan fayyadamuun to’aachuu.
-Dhaabbileen siyaasaa biyya keessa socha’aa jiran akka barbaadaniiti socho’uu/Ummata walga’ii yaamu akka hin dandeenye fi beekumti/heeyyama Aanaa/Gandaa alatti akka hin sochoone qaamni mootummaa bakka hundatti akka too’atu.
-kana booda Namoota komii fi gaaffii adda addaa kaasan Dabarsanii seeratti dhiyeessuu.
Kkf OPDO jidduu gala irraa gadi darbaa jira.
Opdo sadarkaa Aanaa fi Godinoota tiif qajeelfamni kennameefi jira.
haangoo guddaa qabu irraa !!”
OPDOn baka 2 qoodamte! Sababiin qoodinsa kanas dhaabilee siyaasa Oromoo biyya galaniif kan – https://t.co/sRoVeih6tN pic.twitter.com/lUyHmESMEx
“መደመር” ”Ida’amuu” SO IS what we are uttering is false? ISN’T ABDI Mohammed a criminal? IF not who else? – https://t.co/ryJTTsPvoM pic.twitter.com/niwRBtQAyI